Ady amin’ny kolikoly – Tsy hisy fandeferana ary tsy hananan-kavana – Ino vaovao du 22 février 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Corruption MadagascarAdy amin'ny kolikoly - Tsy hisy fandeferana ary tsy...
Fanapahan-kevitra mitsinjo ny tombontsoam-bahoana no navoakan’ny Filoham-pirenena. Ho foana ny gaboraraka fa ho hamafisina ny ady amin’ny kolikoly.
Tapitra hatreo ny gaboraraka. Hentitra ny Fitondrana tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina amin’ny ady amin’ny kolikolu. Arak any fanapahan-kevitry ny minisitra ny 20 febroary lasa teo, nohamafisina tao anatin’izany indray fa tsy hisy fandeferana ary tsy hananan-kavana ny fanaovana kolikoly. Tsy mahagaga raha ahitana lesoka avokoa ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Hany ka maro ireo olona mahazo toerana any anaty ministera any na amin’ny sehatra hafa, tsy mendrika ho amin’ilay andraikitra kanefa noho ny kolikoly dia izy no nisitraka y toerana izay tsy tokony ho azy. Maro ireo zanaka Malagasy manam-pahaizana ary tena nianatra kanefa lasibatra tamin’izany. Rariny loatra raha mametraka ny « Tolérance zero » manoloana amin’ireo tra(tehaka manao kolikoly ny Fitondrana Andry Rajoelina. Mifamatotra amin’ny « velirano » nifanaovan’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ny vahoaka Malagasy rahateo izany ary ao anatin’ny Iem.
Ho enjana ny sazy.
Arak any voalaza hatrany, hisy ny sazy henjana ho an’izay sarona manao kolikoly. Ho an’ireo mpiasam-panjakana zatry lalan-dririnina amin’ny fanaovana kolikoly, ho enjana ny sazy hiandry azy ireo, ka isan’izany ny fandroahana avy hatrany tsy ho isan’ny mpiasam-panjakana intsony. Apetraky ny Filoha ho laharam-pahamehana amin’ny ady amin’ny kolikoly ny tsy fanekena ireo tsenam-baro-panjakana matoatoa. Efa nambaran’ny Filoha izany fony izy nanao fianianana fa « tsy azo ekena mihitsy ny fisiana antso tolo-barotra tsy misy asa tanterahana akory ». Nataon’ny sasany ho fitaovana na fomba nentina nangoronan-karena fotsiny mantsy ity farany tao anatin’ny Fitondrana maro nifandimby. Eo koa ny ady amin’ny kolikoly eny anivon’ny Vondrombahoaka hitsinjara-pahefana, ny sampandraharahan’ny fananan-tany, ny Fitsarana, ny Zandarimariam-pirenena. Ny polisim-pirenena, ny Fanabeazam-pirenena, ny tontolo iainana. Ny fadintseranana ary ny sampandraharaha momba ny hetra.
Mitsinjo ny tombontsoam-bahoaka
Mitodika amin’ny firenena ny soa iombonana ny fanapahan-kevitra tamin’ny Filankevitry ny minisitra, ka nahatonga ny Filohan’ny Repoblika nitaky ny hisian’ny fitovian-jo ho an’ny zanaka Malagasy rehetra ny amin’ireo karazana fifaninanana rehetra hidirana ho mpiasam-panjakana. Tsy hisy intsony izany ny hoe, zanaky ny mahitahita sy ny mpanan-karena ihany no tafiditra amin’ny toerana mendrika kokoa. Manomboka izao mitovy avokoa ny zanaka Malagasy rehetra. Voalaza koa mantsy fa tsy maintsy hajaina ny mangaraharaha ho an’ny mpifaninana rehetra mba hahafany mijery ny naoty azony tamin’ny fifaninanana. Misy avy hatrany ny fandraisana andraikitra raha tahiry ka misy ny trangana kolikoly amin’izay sampandraharaha na ministera voakasika. Nanome toromarika avy hatrany ny Filoham-pirenena entina manatanteraka ireo, ka ao anatin’izany ny fametrahana fomba fiasa mahomby ary fandraisana ny fitarainana ny vahoaka eny amin’ny Sampandraharahan’ny ministera isanisany ary amin’ny Birao fandraisana fitarainana eo anivon’ny Fiadididana ny Filoha. Ho hatevenina hatrany koa ny paikady, hisy ny fanatsarana ny lalàna, ny Andrimpanjakana miady amin’ny kolikoly ary hisy koa ny tombontsoa manokana ho an’izay mpiasam-panjakana mendrika ary ny sazy ho an’izay mandika lalàna.Harilaza R.
Previous articleAffaire KRAOMA, L’avocat suspect, Me Henry Rabary-Njaka, et l’impunité – La gazette de la grande île du 22 février 2019
Next articleNiaiky ny minisitry ny fitsarana RANDRIANASOLO Jacques fa anisany voateny matetika amin’ny kolikoly ny totolin’ny fitsarana – Taratra 23 février 2019